Faipaikany fa tsy ventiny no betsaka… | NewsMada
Faipaikany fa tsy ventiny no betsaka…
Vita iny ny Krismasy: arahaba soa, arahaba tsara. Amin’ny herintaona indray. Ho samy ho tratran’ny ela indrindra. Mbola eo ny fiatrehana ny faran’ny taona. Farany vao misy ventiny izay niainana nandritra ny taona? Fanaovana tomban’ezaka amin’izany ny faran’ny taona na tonon-taona toy izao.
Tsy fandriampahalemana, fifanandrinana… Tsaroana amin’izao taona madiva hifarana izao izany, saika teo amin’ny lafiny rehetra. Eo amin’ny sehatry ny politika, ohatra: eo hatrany ny tsy fanarahan-dalàna afitsoky ny mpitondra. Na mpanohitra eny anivon’ny Antenimiera aza, tsy tafapetraka.
Ampangaina ho manakorontana sy manongam-panjakana tsinona izay mihetsika: andrasana kendry tohina, amoronana raharaha maloto, gadraina. Tenenin-dava ny hoe tsy misy tsy vitan’ny fifampidinihana sy fihavanana. Efa samy niteny ny mpanao politika, firaisamonina sivily, fiangonana…
Tsy mifankaiza amin’izany ny lafiny toekarena sy sosialy. Tsy manana tamberin’andraikitra amin’ny eto an-toerana ny mpitondra, fa amin’ny vahiny ihany? Tompon-trano mihono ny mpisehatra isan-tokony. Tian-kano tsy tian-kano izay atao rehetra, tsy ifampierana na ifampilazana mialoha.
Tsy misy izay fangaraharana, fa manjaka ny asa ambadibadika sy maizimaizina: kiantranoantrano, kolikoly hoe avo lenta… Jereo amin’ny ady tany etsy sy eroa, ny tany lasan’ny vahiny, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany gaboraraka, ny fanondranana an-tsokosoko…
Eo koa ny asan-dahalo sy asan-jiolahy saika isan’andro vaky: fakana an-keriny, fanakanan-dalana… Manampy trotraka ny fitsaram-bahoaka, ny fanafihan-tobina mpitandro filaminana… Tsy matoky mpitondra ny vahoaka ifotony? Ao anatin’izany ny mpitandro filaminana, mpitsara…
Ny lafy ratsiny no tsaroan’ny vahoaka amin’ny mpitondra nandritra ny taona, na eo aza izay lazaina ho zava-bita: asa etsy sy eroa, fampiantranoana fivoriana iraisam-pirenena, fahazoana trosa… Faipaikany fa tsy ventiny no betsaka? Fanaovana tomban’ezaka izao, fandinihan-tena koa. Aiza ary ho aiza?